Iphrofayela Yenkampani | I-Winby Industry & trade Limited
Umhlinzeki wamakhandlela wochwepheshe iminyaka engaphezu kwengu-20
Winby ikhandlela unefektri yakhe yokukhiqiza lonke uhlobo lwamakhandlela anamakha.Sinezinto ezicebile, ubuchwepheshe obuvuthiwe emakethe yamakhandlela iminyaka ecishe ibe ngu-20. Futhi sineqembu lobuchwepheshe lokunikeza insizakalo enhle namakhandlela kumakhasimende ethu avela emhlabeni wonke.
Sikholelwa ukuthi ikhwalithi yemikhiqizo nensizakalo kungumphefumulo webhizinisi ukusiza amaklayenti ukuthi alondoloze isabelomali nesikhathi. Ukunezela ikhwalithi ephezulu ngentengo yokuncintisana kuyisiqinisekiso sobudlelwano bethu obuhlala isikhathi eside bokusebenzisana. Kuze kube manje, siye iqhaza Canton Fair iminyaka. Nazi ezinye izithombe namakhasimende ethu ongazisebenzisa.
Ngephunga elimnandi sisebenzisa izinhlobo ezingaphezu kwezingu-100 zephunga elikhethiwe lamakhandlela anamakha. Abahlinzeki bethu bamakha bangamakha we-CPL, symrise. Yonke iyimikhiqizo ephezulu yabahlinzeki bamakha emhlabeni.
Sisebenzisa udayi we-wax wax ovela eBekro, inkampani yamakhemikhali yaseJalimane edumile. Idayi yabo ye-wax yekhandlela izinzile kakhulu, ayinakekelwa imvelo.
Amakhandlela anamakha angasetshenziswa ezindlini zangasese, emahhovisi, emakamelweni e-yoga, emakamelweni e-psychotherapy, naseziklabhini, njll.
Uyacelwa uqaphele: Lapho kuvutha ikhandlela elinamakha, iminyango namawindi kungavalwa imizuzu eyi-10-30, ngokuvamile kuzokwenza igumbi ligcwale iphunga elihambisanayo, umphumela uyabonakala lapho ungena egumbini uvela ngaphandle. Amakhandlela anamakha kufanele agwenywe ezindaweni lapho ukugeleza komoya kushesha khona, okuzonciphisa kakhulu ulwazi lokusebenzisa.